SiteKick: Na-akpaghị Aka Nchịkọta Akwukwo Achọpụta Akwụkwọ maka Ndị Ahịa gị | Martech Zone
SiteKick: Na-akpaghị Aka Nkọwa Na-acha Nchọpụta Na-acha ọcha maka Ndị Ahịa gị
Fraịde, Septemba 4, 2020 Fraịde, Septemba 4, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ndị ahịa, iwulite akụkọ ntọala ma ọ bụ ijikọ ọtụtụ isi mmalite n'ime dashboard nwere ike ịdị mgbagwoju anya. SiteKick nwere ike ijikwa akụkọ niile ị na-eme kwa izu, kwa ọnwa, na kwa ọnwa.
A na-edepụta akụkọ ọ bụla na usoro ngosi (PowerPoint) ma nwee ike tinye aha ya, kpọọ ya na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ onye ahịa gị, nsonaazụ ya nwere ike dezie ma ọ bụ ozi ndị ọzọ enyere tupu izipu onye ahịa gị.
SiteKick na-enye Uru ndị a
Nkwupụta Otutu-Source - Jikọta data Google, Facebook, na / ma ọ bụ Microsoft gị, họrọ akaụntụ ndị ịchọrọ ịkọ akụkọ, wee hapụ SiteKick ka o mee ihe ndị ọzọ.
Chaatị dị ike - SiteKick na-akpaghị aka na-ewuli eserese mara mma na grafụ nke jikọtara ya na nkọwa edere maka ọwa ọ bụla.
-Kọ akụkọ ọtụtụ ọwa - SiteKick na-enyocha ọwa ọ bụla, na-achọpụta ihe ndị na-egosi uru ị bara: nnukwu mkpọsa, nsonaazụ SEO ọhụrụ, na ndị ọzọ.
Agbanwe agbanwe na n'ọtụtụ - SiteKick na-enyocha ebe data ọ bụla, na-eburu isi nchọta, ma na-ebute ha na usoro na ụda na-agbanwe agbanwe. Jidekwuo ndị ahịa aka ma hapụ ndị otu gị ka ha lekwasị anya na nsonaazụ, ọ bụghị akụkọ edemede aka.
Mgbasa Ozi na Ranbọchị Nkọwa - Enwere ike iji akụkọ niile tụnyere oge gara aga ma ọ bụ n'otu oge n'afọ gara aga maka ndị ahịa oge.
Mmekọrịta Sitekick na isi mmalite data
Google Analytics - Crystal doro anya, ọkachamara ọkachamara na Google Analytics. Na-akọwa usoro gbasara nnọkọ onye ahịa, mgbanwe, ihe mgbaru ọsọ, arụmọrụ ọwa, yana ibe ọdịda.
Google Mgbasa ozi - Akaụntụ Google Mgbasa ozi akpọrọ aha na-egosi mmetụta gị na ọchụchọ, ngosi, na vidiyo vidiyo. Ihe omume n'ime otu mgbasa ozi, isiokwu, ajụjụ, na ndị ọzọ.
Njikwa Nchọta Google - Kọọ akụkọ maka isiokwu dị iche iche, nchọta nchọta na ntanetị na ịpị-ọnụego, yana ibe ọdịda peeji.
Google My Business - Akwụkwọ akụkọ Google My Business na-acha ọcha na-egosi mmetụta gị na oku mpaghara eme, arịrịọ maka ụzọ ịkwọ ụgbọala, yana nyocha azụmaahịa a na-enweta.
Facebook Mgbasa ozi - Akpaghị aka, ederede ederede na Mgbasa ozi Facebook. Kọwaa n'ụzọ doro anya olulu, arụmọrụ mkpọsa, ma kpughee ụzọ niile ndị na-ege ntị si etinye aka na mgbasa ozi ndị ahịa.
Facebook Facebook - Ibe akwukwo Facebook na-agwa onye ahia ya otu ha na ndi na ege ha. Gosi ugboro ole ndi na - ege ntị na - etinye aka na ntanetị ma mụta ihe na - arụ ọrụ.
Mgbasa ozi Microsoft - Mkpesa Mgbasa ozi Mgbasa ozi Microsoft a na-acha ọcha na-egosi mmetụta gị na mgbasa ozi, ngosi, na vidiyo. Ihe omume n'ime otu mgbasa ozi, isiokwu, ajụjụ, na ndị ọzọ.
Mailchimp - Gosiputa oru email gi site na ikpesa ozi Mailchimp. Gwuo na ụbọchị kacha mma iji zipu, usoro isiokwu kachasị mma, na nha ndị na-ege ntị.
Emma Email - Gosiputa oru email gi site na akuko Emma akpaaka. Gwuo na ụbọchị kacha mma iji zipu, usoro isiokwu kachasị mma, na nha ndị na-ege ntị.
Okwute Google - Tinye data ọ bụla ọzọ na akụkọ SiteKick gị, na-akpaghị aka, na-eji njikọ Google Sheets ọhụrụ anyị. Mepụta tebụl omenala na chaatị dị iche iche na akụkọ SiteKick gị, yana njikọta ndị ọzọ niile.
Nweta Nkwupụta Free ugbu a!
Tags: ngwá ọrụ gị n'ụlọngaahịa akukoEmma email na-akọ akụkọfacebook mgbasa ozimgbasa ozi googleGoogle Analyticsgoogle azụmahịa mgoogle search njikwamkpesa mailchimpmicrosoft mgbasa ozipowerpoint
Birdie: AI-Na-akwagharị Ahịa Achọpụta
Crello: Onye na - ahụ maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ dị ka ị ga - aga na ọtụtụ puku ndebiri mara mma